DIGIRTA KORAYA IYO DARYEESHA IYAGA - BEER CAGAARAN
Xeerarka beeritaanka iyo digirta koraya
Qarniyo badan ka hor, dadku waxay barteen qiimaha nafaqada sare ee digirta iyo digirta kale. Digirta ayaa markaa loo yaqaan "hilibka saboolka ah", sababtoo ah waxay ka kooban tahay borotiin badan sida ay ku sameeyaan hilibka.
Dhakhaatiirtu hadda waxay ku magacaabaan digirta "hilibka dadka caafimaad qaba", sababtoo ah digirta ma aha oo kaliya nafaqada, laakiin sidoo kale faa'iido leh. Qoyska legume waxaa ku jira dalagyo badan, soybean iyo digirta ayaa si gaar ah caan u ah. Soy waxaa badanaa laga shaqeeyaa, iyo digirta waxaa loo isticmaalaa uun madadaalo.
Xaalado wanaagsan oo digir ah
Digirta waa dalagga is-pollinating, tani waxay soo jeedinaysaa in beerta aad ku beeri kartaa iyo koraan isla waqti isku mid ah kala duwan. Haricot waa geedka kulaylka jecel, iskuday in aad doorato noocyada ugu horeeya ee Bisaylkiisa ugu beerto beerashada iyo koritaanka. Waxay u adkeeyeen xaaladaha walaaca iyo xaaladaha cimilada xun. Noocyada Bush ayaa bislaadaan hore iyo waxay u adkahay si aad u qabow ka daran.
Si aad u korisato digirta, dooro meel wanaagsan oo iftiin leh iyo meel lagu xanaaneeyo. Digirta dalbaya waraabka. Beerta waxay u baahan tahay qoyaan ciid ah oo sarreeya, laakiin xad dhaafka qoyaanka waa mid aan loo baahnayn.
Waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido: Cagaar. Beerto iyo daryeel.
Akhri qoraalka "Tamaandhada Cherry. Koraaya aqalka dhirta lagu koriyo "halkan
Ogow waxa ay yihiin noocyada ugu fiican ee strawberries //rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/posadka-yagod/vyrashhivanie-klubniki-soglasno-gollandskoj-tehnologii.html.
Kuwa ugu fiican ee digirta ayaa ah kaabajka, yaanyada, qajaarka, basbaaska iyo ukunta. Waa inaadan dooran sariir isku mid ah oo lagu beerayo digirta hore 3 sano.
Deriska wanaagsan ee digirta waa karootada, xididdo, basasha, baradhada, yaanyada, kaabajka. Laakiin isku dhafka ugu fiican waa qajaarka, kiiskan, digirta ayaa keenaya hadhuudhka ugu fiican. Si aad u diyaargarowdid dhul qashin, ku bacriminta ciidda. Halbeeggan soo socda waa mid qumman:
2 qaado oo bur ah dolomite;
1 qaado oo ah amooniyam amooniyoon;
1 qaado oo ah superfosphate double (ammophos ayaa loo isticmaali karaa);
nus baraf ah oo ka mid ah chloride potassium (ama potash).
Xisaabinta bacriminta 1 mitir oo laba jibbaaran oo dhul ah. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa Humus at 4 kg halkii mitir labajibbaaran. Sariirta beerta mustaqbalka waxay u fiicnaan laheyd in ay la socoto sawirada. Corn waa mid aad u weyn doorka.
Waqtiga loo beerto beerashada iyo abuurka abuurka
Beerku waa heer kulul. Heerkulka ugu wanaagsan ee biqilka abuur waa ku saabsan + 10-12 digrii. Abuuri habka noocaas ah in geedo ugu horeysay aan la qaboojiyey. Waxaa fiican inaad sameysid abuurka ka dib bilawga kulaylka. Inta badan, waqtiga ugu fiican wuxuu noqon doonaa dhammaadka May iyo tobanka sano ee hore ee bisha Juun. Caleemaha ayaa dhiman kara marka barafku, marka heerkulku hoos u dhaco ilaa -1 digrii.
Ka hor inta beeridda, kala soo bixi abuurka, ka saar kuwa waxyeellada leh. Haddii ay aad u qalalan yihiin, waxaad diirin kartaa abuurka biyo kulul ilaa 6 saacadood. Ka dibna biyo ka daadi, waxoogaa madhxin kara abuurka iyo dhirta carrada qoyan.
Wixii waxtarka xitaa ka weyn, ka hor inta beero, waxaad ku qaban kartaa digirta ilaa 20 daqiiqo xal xalka potassium, kadibna dhowr saacadood ee xal ash.
Ka fogow inta u dhaxaysa safarka ku saabsan 35-40 cm, diyaarinta abuurka qiyaastii 5-8 cm oo isku xigta. Ku dabool dalagyada leh filim. Qodobka ugu muhiimsan ee beeritaanka waa qiyaastii 3 cm. Hadday beerato qoto dheer, miraha waxay u dhiman karaan inta lagu jiro bararka.
Koraaya oo daryeesha digirta
Heerkulka ugu fiican ee la isku qurxiyo iyo horumarinta digirku waa qiyaas ahaan 20 digrii. Dhirta yaryar uma baahna waraabin badan. Dabadeed baahida loo qabo waraabinta. Haddii inta lagu jiro ubax u oggolaanayo qalajinta ciidda, digirta ayaa dhici doonta.
Inta lagu jiro xilli ku qaataan 2-3 quudinta. Ha iloobin haraaga iyo xakamaynta ciidda. Foosha ugu horeysa waxaa la sameeyaa marka dhirta ay gaarto dhererka 6-7 cm Fududeynta labaad ayaa lagama maarmaan ah ka dib muuqaalka labada lamood ee caleemo run ah. Waxaad isla markiiba dhigi kartaa dhirta, ka tago fogaan ah oo ku saabsan 30 cm iyaga u dhexeeya iyaga.
Wixii digirta curling, ku rakib taageerada. Maadooyinka noocan oo kale ah waa kaararro badan marka loo eego baadiyaha. Daryeel wanaagsan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hesho goosashada qani ku ah. Marka ay afkoda gaadho qiyaas ahaan qiyaastii 2 mitir, qanjirta sare ee geedka. Tani waxay xoojinaysaa Bisaylka digirta.
Haddii aad digirta u ururinayso hadhuudhka, ka dibna ka saar hal mar. Marka dillaacdo digirta, jeex jeexa xididada xididada, ku dhaji rucubyada iyo ku qalaji hoos hoostiisa.
Si taxadar leh u kaydi miraha oo loo isticmaali doono beeritaanka sannadka soo socda meel qallalan oo heerkul fiican leh. Jeexitaanku wuxuu soconayaa illaa 5 sano.
Soo ogow cudurada khatarta ah ee currant cas oo sugaya ninkii beerta ka shaqaynayay
Cudurada madow madow, fiiri sawirada halkan //rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/uhod-za-yagodami/bolezni-i-vrediteli-chernoj-smorodiny-i-sposoby-borby-s-nimi.html
Daryeelka Bean maahan heshiis weyn, laakiin natiijooyinka ayaa kugu farxi doona goosashada qani ku ah!